Sokatra volamena tsy fahita — voalohany amin’ny karazany — hita tao Nepal · Global Voices teny Malagasy
Ny tsifisian-tsinga mpanamainty ao aminy no mahatonga ny sokatra hivolom-bolamena
Voadika ny 14 Aogositra 2020 4:19 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Ελληνικά, Français, Español, 日本語, عربي, English
Sokatra tsy fahita matevi-kodi-malemy milokom-bolamena indiana tsikaritra tao Nepal. Saripikan'i Dev Narayan Mandal. Nahazoana alalana.
Rehefa nalaza dia nalaza an-tserasera tamin'ny volana jolay lasa teo ny vaovao milaza fisian'ny sokatra mavo hita tany amin'ny fanjakana Odisha ao India atsinanana, dia te-hampahatsiahy amin'izao tontolo izao ny Nepalis fa efa nahatsikaritra zava-mitovy amin'izany voalohany — tamin'ny 14 Avrily 2018, raha ny tena marina — raha nahatsikaritra tao amin'ny monisipaliten'i Dhanushadham ao atsimo atsinanan'i Nepal sokatra volamena iray tsy fahita — saingy karazany hafa — voalohany.
Araka ny gazetim-pikarohana avy amin'i Kamal Devkota, Dev Narayan Mandal ary Hinrich Kaiser, izay nivoaka tao amin'ny gazety Herpetology Notes, dia navotsotra ho ao amin'ny akaniny voajanahary ilay sokatra rehefa nopihana sary ho porofo.
Tao amin'ny antsafa imailaka nifanaovana tamin'ny Global Voices, nanazava i Devkota:
Nanavotra ity sokatra volamena tsy fahita ity tao amin'ny monisipaliten'i Dhanushadham tao Nepal ny ekipanay Chandradeep Sada tamin'ny 14 avrily 2018. Taty aoriana i Dev Narayan Mandal namaritra azy ho sokatra indiana matevi-kodi-malemy [anarana siantifika Lissemys punctata]. Nanao fikarohana fanampiny izahay ary nahatsikaritra fa tsy fahita ao amin'ny natiora ity loko mibahan-toerana ity. Ny tsy fahampian'ny fanamaintisana ao amin'ny soso-koditra no mahatonga ity sokatra ity hilokom-bolamena, fa dia ny masonia ihany no misy izay fanamaintisana izay (pigmentation).
Ity no “chromatic leucism” voalohany amin'ny L. punctata ao Nepal, izay karazany voalohany amin'ny zanakarazana L. punctata tavaratra sy fahadimy voarakitra amin'ny karazany. Izany no antony maha-tena zava-dehibe azy ho an'ny mpikajy sy ny mpikaroka.
Sokatra matevi-kodi-malemy indiana fahita mahazatra. Saripikan'i Dev Narayan Mandal. Nahazoana alalana.
Mivolom-batomaitso ny sokatra indiana matevi-kodi-malemy mahazatra ary ahitana marika mavo amin'ny lohany sy ny tendany. Mivolombato ny hazondamosiny ary ahitana singatsingan-doko vony matroka ary mahazo ny anarany avy amin'ny hodi-malemy matevina misolo ny haran-damosina sy kibo.
Ao Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, Pakistan ary Sri Lanka no misy ireny sokatra ireny, ary hita indrindra indrindra amin'ny hady, farihy, kamory ary tanimbary ahitana rano mihandrona. Mihinana izay zavatra rehetra hitany ry zareo toy ny ravina, ny voninkazo ny sifotra, trondro ary sahona.
Sokatra matevi-kodi-malemy indiana izay ratsy tarehy (tahaka ny sokatra maro) saingy tsara amin'ny sary amin'ny ankapobeny izy ity. Mananjavatra antsoina hoe “taola-pe mikirazorazo” izy izay maharikoriko ny mihaino izany.
Raha efa fiafenana tenany ao amin'ny rano maloka sy miloko maitso ny lokon-kazo-damosiny mahazatra, dia mora ahafantarana azy sy mamparefo azy kosa ny karazany milokom-bolamena — sokatra tratran'ny sela tsy ampy fanamaintisana (leosisma krômatika) —. Mahatonga azy ho biby lafovidy fanao an-trano ity lokony volamena mamirapiratra ity.
Albinisma sy leosisma amin'ny sokatra
Ny fikorontanana ara-fototarazo albinisma no mahatonga tsi-fisiam-panamainty mihitsy amin'ny hoditra, volo sy ny maso noho ny tsy fisian'ny tyrosinase, anzyma mandray anjara amin'ny famokarana melanina. Manombana ny mpikaroka fa mitranga indray mandeha isaky ny fiterahan'ny biby mieteraka 10 000 ny albinisma.
Ny leosisma kosa, etsy ankilany, dia fepetra ara-foto-tarazo tena ankavitsiana dia ankavitsiana mampihena ny mpanamaintiny ny biby. Maro amin'ireo biby leosistika no araka ny izy ny masony, raha manopy mena na raozy kosa ny mason'ny tratran'ny albinisma.
Sokatra ao Nepal
Ahitana karazan-tsokatra miisa 16 i Nepal, ka ahiana ho lany tamingana indrindra ny efatra: ny sokatra telo-soritra (Kachuga dhongoka), ny sokatra mena-satroboninahitra (Kachuga kachuga), ny fano indian tokambolo (Chitra indica) ary ny sokatra kely tampisaka (Indotestudo elongate).
Na dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fampihenana ny fandotoana amin'ny fihinanana bibikely, zavamaniry ary biby maty aza, dia mandrahona ny fiavotan-tenan'izy ireo kosa ny fahaverezana, fipatitaka sy ny fahasimbana akany voajanahary.
Araka ny “Turtles of Nepal – A Field Guide for Species Accounts and Distribution” [Sokatr'i Nepal – Taridia ho an'ny Kaonty sy Fitsinjarana Karazana] sy ny fitobahan'ny honko noho ny fitarihan-drano sy ny fanjonoana, ny fampiasana tafahoatra fanafody shimika amin'ny fambolena izay hizotra tsimoramora any amin'ny lalalndrano sy ny fomba tsy lovainjafy amin'ny fanjonoana dia samy hisy fiantraikany ratsy amin'ny sokatra avokoa.
Manampy amin'ny manjo azy ireo ihany koa ny varotra tsy ara-dalàna manao ny sokatra ho biby an-trano, sy ny fampiasana azy ireo ho fanafody nentin-drazana. Misy ireo olona sasany mino fa manatsara ny fahasalamana, fahelana velona ary ny fahatanjahana. Ampiasaina ho zavatra italanjonana ihany koa ny hazon-damosin-tsokatra.
Na dia eo aza ny fandrahonana mahazo ny sokatr'i Nepal tahaka izany, niasa mafy ho fanavotana ireo zavaboary mahafinaritra ireo ny fikambanana (andry) ao an-toerana, toy ny Turtle Rescue and Conservation Center [Foibem-pikajiana sy fanavotana sokatra] any Nepal atsinanana.